Moa ve ny orinasanao manao an'ireto hadisoana amin'ny media sosialy mahazatra ireto? | Martech Zone
Alahady, Novambra 16, 2014 Alahady, Novambra 16, 2014 Douglas Karr
Koa satria mitohy mivoatra ny paikadin'ny media sosialy, mihatsara ny fitaovana famakafakana ary manohy gaga aho amin'ny zavatra mandeha sy izay tsy mandeha - matetika tsy lazaiko amin'ny olona hoe manao zavatra izy ireo ratsy amin'ny media sosialy. Izay mety ho lesoka amin'ny fandaharam-potoanako dia mety ho tetika lehibe iray ho anao. Miankina betsaka amin'ny zavatra andrasan'ny mpihaino anao izany raha manatanteraka izany antenainao izany ianao.
Izany dia nilaza fa misy ny fototra ifotony izay tokony ho ao an-tsaina ny orinasa tsirairay Jason Squires dia nanao asa mafy hanoroana azy ireo eto amin'ity infographic ity.
Ireto ny lesoka 5 ambony - vakio ny infographic ho an'ny ambiny!
Mifantoka amin'ny isan'ny mpanaraka anao kalitao
Manampy ny tabataba
miparitaka manify loatra ianao
Tsy fahampiana a toetra
tsy mamelombelona mpanaraka anao
Tags: lesoka amin'ny haino aman-jery sosialyJason squiresfahadisoanahaino aman-jery sosialylesoka amin'ny media sosialy